Madaxweynaha Puntland oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Qardho. – Radio Daljir
Qardho, Apr 28 – Madaxweynaha dawladda Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta (khamiis) si weyn loogu soo dhawaayey magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kar-kaar, waxaana madaxweynuhu saaka ka soo kicitimay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
M/weyne Faroole waxaa kaga soo horreeyey Qardho wasiirro, xildhibaanno iyo saraakiil ciidanka oo ka soo jeeda gobolka kuwaasoo ay ka mid yihiin wasiirka amniga, wasiirka deegaanka iyo xubno kale.
Boqolaal ka tirsan dadwaynaha magaalada ayaa isugu soo baxay waddooyinka si ay madaxweynaha u soo dhawaayeen, kuwaas oo ku dhawaaqayey erayo lagu taareerayo dawladda.
Madaxweynaha ayaa hadal kooban oo uu ka jeediyey hotelka Alla-aamin ee magaalada Qardho oo uu ku dagay uga mahadceliyey dadwaynaha sida diirran ee ay u soo dhaweeyeen, waxaana la filayaa inuu maanta galinka dambe la kulmo mas?uuliyiinta gobolka oiyo kuwa degmada.
Muxuyadiin Hiirad Kaatun